दशैंमा डिशहोमको डबल धमाका !! - Laganikhabar
दशैंमा डिशहोमको डबल धमाका !!
सोमबार, ०५ असोज २०७७, १५ : ३४ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौँ - डिशहोमले आफ्नो ग्राहकहरूलाई अझै बढि सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले “Dish Home मा Dealer दाईको Discount” नामकअफर संचालन गरिरहेको छ ।
यसै अफरलाई डिशहोमले वडा दशैंको उपलक्ष्यमा पनि निरन्तरता दिँदै २४ महिना रिचार्जमा डबल धमाका अफर ल्याएको छ । यस अफरमा डिलरदाई मार्फत Fund Transfer बाट बार्षिक रिचार्ज गर्दा Weekly Lucky Draw मा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ भने २ बर्षे रिचार्जमा Weekly Lucky Draw मा डबल मौका प्राप्त हुनेछ । हप्तामा २ जना भाग्यशाली ग्राहकहरूले प्रतिव्यक्ति एक/एक लाख नगद उपहार यस अफर मार्फत जित्नेछन् ।
Weekly Lucky Draw को बिजेताको घोषणा डिजिटल प्रणालीबाट ग्राहकहरूको डिशहोम सेट–टप बक्सको CAS ID को आधार मागिन्छ । हरेक हप्ताको शुक्रबार साँझ ५ बजे डिशहोमको Showcase channel No 100 र रमाईलो टिभीमा Lucky Draw को प्रत्यक्ष प्रशारण हुन्छ ।
त्यसैगरी, अनलाइनमार्फत ५ हजार वा सो भन्दा माथि रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरूलाई पनि यो अफरमा सहभागी गराईने छ । Fund Transfer बारे अधिक जानकारीको लागि देशभर रहेको डिशहोम बिक्रेता, नजिकैको डिलर वा डिशहोमको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
युथ इन्नोभेशन एक्सिलिरेशन क्याम्पका लागि ओपोद्वारा यूएनडीपीसंग सहकार्य
फक्सवागनको टप–क्लास फ्ल्यागसिप मोडल नयाँ ट्वारेग–आर नेपाली बजारमा
ओपो ईन्नो डे २०२१ले जित्यो एफओटीडी अवार्ड
ग्यापुबाट सामान खरिद गर्दा आयुष्मा भट्टले जितिन् अप्रिलिया स्कुटर
सुदर्शन केमिकलको च्यानल पार्टनर बन्यो एसके प्रालि